Ukwehluleka: Amalebhu we-Microsoft Adcenter kanye .NET | Martech Zone
Ukwehluleka: Amalebhu we-Microsoft Adcenter kanye .NET
NgoMsombuluko, Septemba 8, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Abantu bayazibuza ukuthi kungani ngingakujabuleli ukuhlela ku ASP.NET. Kungenxa yokuthi njalo lapho ngenza, ngithola ikhasi lephutha elifana naleli. Ngibona ukuthi abantu abalungile ku- Microsoft bengakwazi ukuthuthukisa ezabo izinhlelo ngaphandle kokwenza, ngizoya kanjani ?! Kusuka Ukubikezela kwe-Microsoft Adcenter Labs Demographics:
Tags: bill@tuitivegroup.comukushicilela ibhulogiubbeiwijethi ye-facebookukubongaiwijethi ye-twitter
I-WordPress: I-plugin Yokuhlanganisa ye-SMS
Isinyathelo esisodwa sokukhulisa umkhiqizo wakho we-imeyili
Sep 9, 2008 ku-9: 22 AM
Angikutholi… lelo yikhasi lephutha elijwayelekile. Ungakuthola nganoma yiluphi uhlelo lokusebenza (i-PHP, i-Ruby, i-Perl, njll.) Empeleni iphephe kakhulu ngoba ngokungafani ne-PHP, ngokuzenzakalela i-ASP.NET ifihla umlayezo wephutha ukuze ingadalulwa emhlabeni futhi isayithi lakho lingaba yisisulu kubaduni.
Sep 9, 2008 ku-9: 36 AM
Ungathola ikhasi lephutha nganoma iyiphi ipulatifomu, ngokuqinisekile iSameer. Isikhalazo sami ukuthi yisayithi le-MICROSOFT elinephutha le-MICROSOFT. Kufanele babe namahloni ngokuthi bafake isicelo sokuthi amaphutha, unikezwe ukuthi yibo ababhala zombili i- IIS ne-ASP.NET.
Sep 11, 2008 ku-9: 43 AM
Ngiyaliqonda iphuzu lakho manje. Usho ukuthi leli sayithi elithile le-Microsoft kufanele kusolwe.
Kulungile iphuzu lakho livumelekile, kufanele benze ngokwezifiso ikhasi labo lephutha (okuwumsebenzi omncane) kepha ukubeka icala ku-NET akunakuphikwa ukusho okuncane. Lokho kungafana nokuthi “Angikuthandi ukuhlela ku-PHP ngoba isiza se-PHP sinekhasi elijwayelekile lephutha” 😛
Sep 11, 2008 ku-11: 43 AM
Ngithathe ukumba eMicrosoft, nami, uSameer :) Ngicabanga ukuthi amakhasi amaphutha ku-IIS maqondana ne-ASP.NET ayesabeka! Kwezinye izilimi, kufaka phakathi i-PHP, uma ukuphatha iphutha kuvuliwe, ngithola imininingwane mayelana nephutha. Kubonakala (kimi) lapho ngivivinya nge-ASP.NET engikutholayo nje yile nto yokulungiselela.
Sep 17, 2008 ku-11: 30 AM
Ahh kulungile manje ngiyaqonda. Kepha khumbula ukuthi kuyesabeka ngokuklama. Bafihla ngamabomu umlayezo wephutha wangempela. Lokhu kungenxa yokuthi awufuni ukuba sengozini kwakho kuvezwe umhlaba.
Into efanayo ne-ASP.NET, ubona isithombe-skrini onaso? Mane nje ungeze i-customErrors = icishiwe lapho-ke izokunikeza umlayezo wephutha oqondile.
Infact kukhona ngisho ne-plug and play error handling module ongabizwa ngayo Elmah engicabanga ukuthi yinhle nje, ngikucebise ukuthi isetshenziswe emsebenzini futhi iyamangalisa. Kulokhu ungafihla imilayezo yamaphutha kubavakashi besiza, kepha izongenwa kahle futhi ingahle isethelwe ukukuthumela i-imeyili njalo lapho kuvela umyalezo wephutha omusha. Khuluma ngobumnandi 😉
I-PS ngiyayithanda futhi i-PHP, kepha ngemuva kokusebenzisa i-.NET iminyaka emi-2 ngokugcwele ikhule kimi 🙂